■ Coil mitohy tsy misy welding lasitra
■ coil SS 304 miaraka amin'ny pickling & Passivation
■ Angovo fitahirizana Drive mivantana
■ Elektronika De-scalar hampihenana ny tsingerin'ny Blow down
■ Bokotra pataloha maimaim-poana
•Fitaovana fananganana: Panels sy Coil misy amin'ny Galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Panel azo esorina (tsy voatery): Mba hidirana amin'ny Coil sy ny singa anatiny ho fanadiovana mora foana.
•Paompy mivezivezy: Motor Siemens / WEG, mandeha an-dalambe, tabataba ambany, Fahafahana lehibe nefa herinaratra ambany.
PFitsipika momba ny asa: Ny rano mangatsiaka dia apetaka amin'ireo paosin-tsifotra ery ambonin'ny coil condensing ary zaraina mitovy amin'ny faritra ivelany amin'ny coil condensing, mamorona sarimihetsika rano manify be. Ny mpankafy axial dia mitondra rivotra avy amin'ny sisiny. Manatsara ny fikorianan'ny rivotra mamorona tsindry ratsy ao anatin'ny masinina izy io, mampiroborobo ny hafanan'ny etona sy ny etona amin'ny etona amin'ny rano, ary mampitombo ny fiparitahan'ny hafanana avy amin'ny coil.
Manjavona ny rano izay manala ny hafanana.
Ny rano maripana avo dia midina avy ao anaty coil ary mifandray amin'ny rivotra madio. Mampidina ny mari-pana amin'ny rano izy alohan'ny hanangonana azy ao amin'ny tavy eo ambany.
•Zavamaniry vy •Polyfilm
•harena ankibon'ny tany •Fananganana herinaratra
Teo aloha: Sambo mpanampy amin'ny refrigeration
Manaraka: Tilikambo fanamafisana ny tadivavarana mihidy - mikoriana miampita
Tower hihena Bac
Tilikambo hihena mangatsiaka voajanahary
Tilikambo fanamafisana nokleary
Tower Cooling Process
Fitsaboana rano ho an'ny Tower Cooling